भिम रावल भन्नुहुन्छ : भारतिय फौज हटाउ,हाम्रो सेना राखौ,हामीले सक्छौ…हेर्नुहोस् । सहमत हुनेले मात्रै सेयर गर्नुहोला । – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/भिम रावल भन्नुहुन्छ : भारतिय फौज हटाउ,हाम्रो सेना राखौ,हामीले सक्छौ…हेर्नुहोस् । सहमत हुनेले मात्रै सेयर गर्नुहोला ।
ज्योति मगरले ऋषि धमलाजस्तै पोईको खोजीमा छु भनेपछि….(भिडिओ सहित)
अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्न पाउनुपर्छ सहि कि गलत ?? आफ्नो विचार राख्नुहोला !